Ka mid noqo oo ansax ololaha! - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ka mid noqo oo ansax ololaha!
Ku soo biir Ololaha maanta oo naga caawi #Faafi Nabadda.
Halkan guji si aad u soo gudbiso Hay'ad ama Hay'ad Aqoonsi!
Ku biirista waa muujinta fudud ee ka go'an in ay taageeraan yoolalka Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada:
In la dhiso wacyiga bulshada iyo taageerada siyaasadeed ee ku aaddan soo bandhigidda waxbarashada nabadda ee dhammaan dhinacyada waxbarashada, oo ay ku jiraan waxbarashada dadban, dhammaan dugsiyada adduunka oo dhan;
iyo, in kor loo qaado waxbarashada dhammaan macallimiinta si loo baro nabadda.
Markaad ku soo biirto, fadlan tixgeli inaad ka qaybgasho!
Liiska tabaruca: ka mid noqo liistadaan haddii aad xiiseyneyso inaad maqasho fursadaha iskaa wax u qabso ee lagu taageerayo Ololaha.
Isuduwaha Dalka: ka mid noqo liistadan hadaad danaynayso inaad bilowdo qayb ka mid ah ololaha - ama haddii aad xiisaynayso abaabulka taageerada ololaha ee gobolkaaga adduunka.
Xulo xulashooyinkaaga isgaarsiinta (waad cusbooneysiin kartaa kuwan wakhti kasta). Qof kasta oo ku soo biira wuxuu helayaa joornaalkeenna billaha ah - oo lagu soo ururiyey qani ku ah wararka, falanqaynta, manaahijta, dhacdooyinka, iyo warbixinnada adduunka oo idil. Intaas waxaa sii dheer, waxaad dooran kartaa inaad saxiixdo:
Ku dheji sida ay u dhacaan: Hesho soo koobitaan maalinle ah oo ku saabsan dhajinta cusub markay ka soo baxayaan saxaafadda!
Digest toddobaadle: Hesho hal mar usbuucii hal jeer ee wararka, dib u eegista & dhacdooyinka!
Digniinta Waxqabadka: Hesho emayl ku saabsan ololeyaasha waqtiga xasaasiga ah iyo fursadaha maalgelinta.
Ku soo biir Ololaha!
Country *AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaJacaylkuAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaChristmas IslandColombiaComorosCongoCook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEast TimorEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEstoniaItoobiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFaransiiska GuyanaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarBoqortooyada IngiriiskaGreeceGreenlandGrenadaGuatemalaGuineaGuinea BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIiraanCiraaqIrelandIsraa'iilItalyIvory Coast (Cote D'Ivoire)JamaicaJapanUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartinique (Faransiis)MauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaKuuriyada waqooyiNorwayCumaanPakistanPalauFalastiin (dhulal la haysto)PanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPolandPolynesia (Faransiis)PortugalPuerto RicoQadarRomaniaRussian FederationRwandaS. Georgia & S. Sandwich Isls.Saint HelenaSaint Kitts & Nevis AnguillaSaint LuciaSaint Pierre iyo MiquelonSaint Tome iyo PrincipeSaint Vincent & GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeJamhuuriyadda SlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth KoreaSpainSri LankaSudanSurinameSwazilandIswidhanSwitzerlandSuuriyaTajikistanTaiwanTansaaniyaThailandTogoTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesBoqortooyada IngiriiskaUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuGobolka VaticanVenezuelaVietnamIslands Virgin (British)Western SaharaYemenYugoslaviaZambiaZimbabwe
Xulo liiska (yada): Waxaan ku yaboohay inaan taageero ujeedooyinka Ololaha Caalamiga ah ee Nabadda Waxbarashada Dheef-Toddobaadle Ku dheji sida ay u dhacaan Digniinta Waxqabadka Liiska Tabaruca Iskuduwaha Dalka
Markaad ku soo biirto waxaad ogolaatay inaad naga hesho isgaarsiinta emaylka annaga (iyadoo la raacayo dookhaaga oo la beddeli karo waqti kasta) isla markaana aad ku raacdo kuweenna Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah. Waad ka bixi kartaa wakhti kasta.
Waad ku mahadsan tahay ku biirista Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda! Fadlan ka hubi sanduuqaaga ama faylka spamka si aad u hesho iimaylka ka yimid [emailka waa la ilaaliyay] si loo xaqiijiyo rukunkaaga.